Epistily voalohany nosoratan'i Joany - Wikipedia
Ny Epistily voalohany nosoratan'i Jaona na Epistola voalohany nosoratan'i Joany na Taratasy voalohany nosoratan'i Joany dia boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an'ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 90 sy 110 no nanoratana azy. Misy toko 5 ity boky ity.
2.2 Ny nanoratana
2.3 Fotoana nanoratana
5 Lofarano sy fanamarihana
Πρώτη Επιστολή Ιωάννη / Prôtê Epistolê Iôannê no anaran'io epistily io amin'ny teny grika fa Epistula I Ioannis kosa amin'ny teny latina.
Ny lovantsofin'ny Fiangonana dia manao ny epistily telo mitondra ny anaran'i Joany ho nosoratan'i Joany Evanjelista. Ankehitriny anefa dia maro ny ady hevitra ny amin'ny fahamarinan'izany lovantsofina izany. Amin'ireo soratra kanonika amin'ny anaran'i Joany dia misy ny mpanampahaizana milaza fa ny Evanjelin'i Joany sy ny Epistily voalohan'i Joany dia soratr'i Joany Evanjelista. Ny manampahaizana hafa dia mihevitra fa soratr'olon-tokana ireo, izay mety ho ilay Joany (na Jaona) mitonon-tena hoe "Loholona" na "Antidahy" (jereo: Joany Antidahy) resahina ao amin'ny Epistily faharoa (2Joa. 1.1) sy ao amin'ny Epistily fahatelo (3Joa. 1.1), fa tsy i Joany Evanjelista. Ny ankamaroan'ny mpikaroka anefa dia mihevitra fa ilay Joany Loholona na Antidahy no nanoratra ny epistily telo sy ny evanjely amin'ny anaran'i Joany.
Ny nanoratana[hanova | hanova ny fango]
Ny Epistily voalohany nosoratan'i Joany dia karazana toriteny fa tsy toy ny epistily na epistola (izany hoe taratasy alefa) araka ny mahazatra (izay ahitana teny fiarahabana milaza ny anaran'ny mpandefa sy ny andefasana, sy teny famaranana ahitana firarian-tsoa). Mety nosoratana ho an'ny fiagonana na faritra iray izy, ka mety ho i Azia Minora izany.
Ny mpikaroka maro dia miara-manaiky fa manodidina ny fiafaran'ny taonjato voalohany no nanoratana ireo epistily ireo.
Mety ho fiangonana maromaro no nandefasana ny epistily mba hanampiana azy ireo ho mahatoky ao amin'ny finoana. Tandindomin-doza ireo fiangonana ireo amin'ny fisian'ny mpaminany sandoka (1Joa. 4.1) izay mandà ny maha avy amin' Andriamanitra an'i Jesosy Kristy tonga nofo (1Joa. 4.2). Ny fampianaran'ireo antikristy ireo (1Joa. 2.8) dia hita fa endriky ny gnostisisma vao miforona, dia filozofia ara-pivavahana izay milaza fa ny fahalalana ihany no ahafaha-manakatra an' Andriamanitra (1Joa. 2.4). Nanohintohina ny fiombon'ireo fiangonana tany amboalohany izany fampianarana izany ka nahatonga ny mpanoratra hanao izay hialan'ireo antikristy ireo eo amin'ny Fiangonana (1Joa. 2.19).
Mikendry ny hanoherana ny "fanahin'ny fampiviliana" na "fanahin'ny fahadisoan-kevitra" (1Joa. 4.6) izay nampidirin'ireo mpaminany sandoka ireo ity epistily ity. Satria nisy ny fisarahana (1Joa. 4.3), ny Kristiana tsy mifankatia (1Joa. 2.9; 4.20), izay mihevi-tena ho tsy manam-pahotana. Ny sasany indray nandao ny Fiangonana. Nampahatsiahy ny fanambaràna marina ny mpanoratra, dia ny amin'ny maha fitiavana an'Andriamanitra ka nandefasany ny Zanany ho sorona hanadiovana ny fahotantsika. Tsindrian'ny mpanoratra koa fa raha toy izany no nitiavan' Andriamanitra antsika dia tokony hifankatia koa isika satria ny fifankatiavantsika no hitoeran'Andriamanitra amintsika ka hahatanteraka ny fitiavany antsika (1Joa. 4.8-12).
Lofarano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]
↑ Voambolana: "loholona" na "presbytera", hoy ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy.
↑ Voambolana: "Antidahy", hoy ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy.
↑ Voambolana: "fanahin'ny fampiviliana" ny ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy.
↑ Voambolana: "fanahin'ny fahadisoan-kevitra" ny ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_voalohany_nosoratan%27i_Joany&oldid=1038780"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 10:37 ity pejy ity.